UNks Angie Raseroka, iMenenja yoHlelo lweMfundo esikhungweni samakhono e-IBM, uthe nakuba izinhlelo ezinje zivame ukuhlelelwa izisebenzi nabafundi be-Information Systems noma i-Computer Science, kodwa futhi lungasetshenziswa yilabo abasemikhakheni yezoMthetho, yezeSayensi, kanye neminye. UNks Raseroka uthe: ‘I-DNA ifana nokufunda bukhoma ngesikhathi esizwana nomuntu ngamunye. Abantu abafundayo bathola ibheji ngesigaba sezifundo ngasinye.’
Lolu hlelo lwe-DNA lunesigcawu sokufunda ngekhompyutha lapho abantu abasha befunda khona amakhono ngezokuxhumana. Inhloso ukuhlonyiswa kwabantu, osomabhizinisi, nemiphakathi ngolwazi namakhono okusungula nokwenza izindlela zabo zokusebenza ezifana nalolu hlelo ukuze abantu abasha bakwazi ukuthola imisebenzi ehambisana namakhono abo.
Ngenkathi kwethulwa lolu hlelo, uRaseroka ukhombise ukuthi i-DNA isebenza kanjani, wabakhombisa izigaba zayo eziyisikhombisa. Lolu hlelo, olutholakala ngesiNgisi nangesi-Arabhu, lwenza ukuthi abafundi bakwazi ukubheka ucwaningonto, babuke namavidiyo ahambisana nawo.
Kubalulekile ukuthola amaphesenti angama-80 esigabeni isifundo ngasinye. Kutholwa isitifiketi ekugcineni.
Izigaba ezinjenge-Cloud Computing ne-Coding zifundisa abantu ukuthi bangawenza kanjani ama-app.
URaseroka uthe inhloso ye-IBM wukunikela emphakathini wase-Afrika nokucija intsha ngokuthuthukisa ubuchwepheshe besimanjemanje bokusebenza (i-Fourth Industrial Revolution). Uthe i-IBM iyazi ukuthi kunenselelo ye-data kanti isebenzisana nohulumeni nomasipala ukuthi i-internet itholakale ezindaweni ezithile.
UDkt Rudi Kimmie wase-UKZN weluleke izisebenzi nabafundi ukuthi lokhu kuwuhlaka lokufunda ngakho abantu kudingeka bazinike isikhathi.
Izethameli zinxuswe ukuthi ziwuhlabe ziwulawule emakhaya nasemphakathini.
Amagama: ngu-Sithembile Shabangu